Cabdi-kariin Guuleed: ”Ma aqbalayno in Fayraska Corona lagu marmarsiyoodo oo dib loo dhigo Doorashooyinka” – HalQaran.com
Madaxweynihii hore ee Galmudug, Cabdi-kariin Xuseen Guuleed /Sawir hore/Keydka HQ
Galmudug (Halqaran.com) – Madaxweynihii hore ee Maamulka Galmudug Cabdi-kariin Xuseen Guuleed ayaa war saxaafadeed ka soo saaray xaaladda doorashooyinka Qaranka iyo cudurka Coronavirus.
Qoraal uu soo saaray ayuu kaga hadlay doorashadda 2021-ka dalka ka dhacaysa iyo Cudurka Coronavirus Covid-19.
Madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed ayaa ka digay in Coronavirus marmarsiyo loogu dhigto in dib loo dhigo doorashadda Soomaaliya ka dhacaysa sanadka 2021-ka.
“Ayadoo uu aduunku si ba’an ugu sii faafayo Cudurka Coronavirus “Covid 19”, dhibaato culusna uu ku hayo noloshii aadanaha iyo dhaqaalahii caalamka intaba, ayaa waxaa muuqata in dalkeena oo markii horaba la daalaa dhacayey duruufahiisa gaarka ah uu halis ugu jiro – Allaha naga badbaadiye – inuu halakeeyo cudurkaas khatarta ah oo dhibaato daran ku haya dowladahii waaweyna ee horumarka ka gaaray xagga caafimaadka iyo dhaqaalaba.
Waxaa dowladda dhexe laga doonayaa inay qaadato mas’uuliyadeeda ku aadan ka hortagga iyo la dagaalanka curdurkaas, anigoo dowladda ku amaanaya tilaabooyinka ay ilaa hadda qaadayna, haddana waxaad mooda inuu wali jiro gaabis la xiriira qaadashada tilaabooyinkii lagama maarmaanka u ahaa la tacaalidda iyo ka hortagga cudurka, kuwaas oo ay ugu muhiimsan yihiin:
Dhismaha guddi qaran oo ka kooban madaxda sare ee dowladda dhexe, madaxda dowlad gobaleedyada, madaxda kala duwan ee mucaaradka iyo madaxda qeybaha bulshada, si loo muujiyo MIDNIMO QARAN, abaabul iyo in meel looga soo wada jeesto halista cudurka, la tacaalidiisa iyo xakameyntiisa.
Billaabidda olole heer qaran ah oo tabarucaad loogu ururinayo la dagaalanka cudurka COVID19, si loo helo qalabkii iyo adeegyadii lagama maarmaanka u ahaa ka hortagga, la tacaalidda iyo xakameynta cudurka.
Qaadashada go’aano adag oo la xiriira xakameyta faafista cudur ee bulshada dhexdeeda, sida hakinta isku socodka bulshada, xakameynta shirarka iyo isku imaatinka waaweyn iyo waxii tilaabooyin ah ee hadba la jaanqaadaya marxalad kasta.
Joojinta gabi ahaanba canshuuraha la saaro mushaaraadka, macaashu macaashka iyo badeecadaha aasaasiga u ah nolasha dadweynaha, sida cunooyinka, daawooyinka iyo qalabka caafimaad, mudada lagu jiro la dagaalanka cudurka COVID19, si dadweynaha Soomaaliyeed ay sicir jaban oo macquul ah ugu helaan badeecadahaas taabanaya nolashooda.
Ku wacyigalinta bulshada halista cudurka iyo sida sahlan ee uu u faafo loona kala qaado.
Waxaan madaxda dowlad gobaleedyada dalka ugu baaqayaa in ayagoo eegaya ahmiyadda la dagaalanka cudurkaan halista ah ay si dhow uga wada shaqeeyaan ayaga iyo dowladda dhexe la tacaalidda halista cudurka COVID19.
Waxaan siyaasiyiinta, aqoonyahanka iyo waxgaradka kale ee Soomaaliyeedba ku boorinayaa in ay qeyb mug leh ka qaataan ololaha qaran ee la dagaalanka, xakameynta iyo la tacaalidda halista cudurka COVID19.
Waxaan dhaqaatiirta iyo culuma’udiinka Soomaaliyeed u soo jeedinayaa inay kaalin lixaad leh ka qaatan wacyigalinta bulshada, ayadoo la adeegsanayo hal ku dhaggii caafimaad ee ahaa “ka hortagga ayaa ka wanaagsan daaweynta”.
Waxaan ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeed ee uu Ilaahay hantida siiyey ku guubaabinayaa in ay kaalin weyn oo wax ku ool ah ka qaataan samata bixinta shacabkooda iyo umaddooda, ayagoo ku deeqaya tabarucaad muuqda, qiimaha badeecadahana hoos u dhigaya, waana inay ka fogaadaan kana taxadaraan in ay uga faa’ideystaan Shacabkooda dhibaateysan duruufaha adag ee ay wajahayaan.
Waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay si dhab ah u qaatan halista iyo khatarta cudurkaas halakeeyay dhammaan dunida, galaaftayna ilaa hadda nolosha in ku dhow 50 kun oo qof, xanuunkiisana ilaa hadda la daala dhacayaan in ka badan hal milyan oo qof.
Waxaan jaaliyadaha Soomaaliyeed ee dibadaha ku nool ee aynu ogsoonahay in dad badan uu cudurku nooga laayey usoo jeedinayaa kuna adkeynayaa in ay qaataan talooyinka, raacaana tilaabooyinka ay qaateen dowladaha ay ku nool yihiin.
Ayadoo laga ambaqaadayo oraahdii taariikhiga aheyd ee ” GACANNA WAA KU DAGAALAMEYNAA GACANTA KALANA WAA KU CODEYNAYNAA” ee uu yiri – Allaha u naxariiste – Marxuum Cabdirashiid Cali Sharmaarke sanadkii 1964tii, xilli dalku uu wajahayey xaalad adag oo dagaal iyo mid doorashooyin qaran, waxaan soo jeedinayaa arrimaha soo socda:
In aan gabi ahaanba la joojin howlaha kale ee halbowlaha u ah dowladnimada iyo qarannimada, si xikmadeysan ay u socdaa loona wado, ayadoo la adeegsanayo adeegyada kala duwan ee tiknoolajiyada casriga ah ee lagu kulmi karo laguna wada shaqeyn karo ayadoon meel qura la wada joogin.
In laga foojignaado khatarta dhagar qabayaalka Al-shabaab iyo kooxaha burcadda abaabulan ah, ee laga yaabo in ay ka faa’ideystaan xilli ay bulshada dhamaanteed ku sii jeedo lana daalaa dhaceyso la dagaalanka cudurka, sidaa daraadeed waa inay jirtaa foojignaan amni ee guud, si gaar ahna xil la iskaga saaro ilaalinta suuqyada iyo goobaha muhiimka u ah bulshada iyo dowladnimada.
In dowlad iyo mucaaradba laga fogaado in la siyaasadeeyo cudurka, ayadoo looga golleeyahay gaarista ujeedooyin siyaasadeed oo gaar ah.
In aan cudurka loo adeegsan marmarsiyana looga dhiganin qabsoomid la’aan doorashooyinka qaranka, waxaana dowladda, guddiga qaran ee doorashooyinka iyo ciddii kale ay khuseysaba ugu baaqeynaa kuna adkeynaynaa in doorashooyinkaas lagu qabto waqtigooda, aysanna marnaba cidi ku fekarin dib u dhigis iyo muddo kororsi, taas oo wadanka gelin karta dib u dhac, qalalaase siyaasadeed iyo mid amni intaba.
Waxaan Beesha Caalamka guud ahaan, gaar ahaan dalalka aynu saaxiibada nahay ugu baaqayaa in ay ka gacansiiyaan dowladda soomaaliya ka hortagga iyo la dagaalanka halista cudurka COVID19, si hagar la’aan ahna ugu soo gurmadaan shacabka Soomaaliyeed ee wajahaya marxad adag oo uusan dhaqaale ahaan iyo adeeg ahaanba kaligiis wajihi karin.
Tags: Cabdikariin Guuleed, dib loo dhigo Doorashooyinka, Madaxweynihii hore Galmudug, marmarsiiyo Cudurka Coronavirus
US airstrike naturalizes three al-Shabaab fighters